Obbolee sadan jiruufi jireenya isaanii qabsoo Oromoof aarsaa taasisan: – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsObbolee sadan jiruufi jireenya isaanii qabsoo Oromoof aarsaa taasisan:
Obbolee sadan jiruufi jireenya isaanii qabsoo Oromoof aarsaa taasisan: Dirribee Ittaanaa, Darguu Ittaanaafi Sannaayit Ittaanaa.
Darguufi Dirribeen murtii du’atu itti murtaa’ee ture. Rabbi warra nama ajjeesutti dabarsee isaan hin kennine kunoo bahaniiru.
SIMANNAAN CIMEE ITTI FUFUU QABA
Qabsaawota Lubbuu saba ofiitiif wareegama kaffalaniif simannaa cimattu barbaachisa
Namoota dhiyoo kana hiikaman keessaa Daani’el Ayyaanaa, Masfin Ittaanaa fi Chairnnat ( Charee) faa waliin baroota 2004-2007 keessa zoonii tokko keessa waliin turre; walitta dhiyeenna guddaa qabna ture. Me ilaalaa haga an bahee as 2007 irraa hanga 2018 waggaa 11. Bara an hidhamus na dura achi turan jarri kun. Yakkaa biraa hin raawwanne yakki isaanii quuqama saba isaanii ti. Shira mootummaa Abbaa-irreetiin bara 2003-2018 waggoota 16 dararamaniiru.
Qeerroon Oromoo qabsaawota Oromoo dubbiin isaanii duutee awwaalamte qabsoo hadhaawaan lubbuu itti godhee deebisee kaase. Qabsaawota Oromoo akka Inj. Mesfin, Kaffiyaaloo … fa’a Simannaa hoo’an Kaleessa Burraayyutti taasiftaniif galata guddaa qabdu! Qabsaawota baay’innaan gaafa guyyaa 09/10/10 baahan kana akkuma mana hidhaatii qabsoofnee baafne deebifnee ijaaruu qabna. Deeggarsaa horii karaa lakk. HERREGAA baankii OIB 879283 Maqaa Olbaanaa Leellisaa Oljennaa tiin banametti gumaacha godhuun deebifnee haa dhabnu.
#Humnii_Horii_fi_Abdii keenna #Uummata keenna
Kun Gabbitaa Gammachuu ti. Qabsaa’aan Kun woggoota 9 dura qabamee dararaa fokkataa keessummeessaa tureera.Woggoota 6 guutuuf mana dukkanaa keesatti erga hidhamee turee booda Murtii sobaa itti murtaaye woggoota 18 osoo hin xumurree qabsoo Qeerroon guyyaa hadhaa mana hidhaa bayeera.
Abdi Mude meskel adababay strikes again
Bakki kun Finfinnee Addabaabayii Masqalaati. Guyyaa har’aa bakka iriirri itti waamame. Kunoo akkuma argaa jirtan karaa nagaafi tasgabbaa’een iriirrichi Milkiin xumurameera. Isa hafe gara booda toora Skype tiin nu eegaa! Kkkkkk!